Wafdi ka socda Urur Goboleedka Igad oo Kismaayo maanta Gaaraya – SBC
Wafdi ka socda Urur Goboleedka Igad oo Kismaayo maanta Gaaraya
Magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose iminkana ay ku sugan yihiin madaxda Maamulka dowlad goboleedka Jubaland waxaa maanta gaari doona wafdi ka socda urur goboleedka Igad .
Wafdigan ayaa maalin nimadii shalay ka degay Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho halkaas oo ay kula kulmeen Madaxda Sar sare ee Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya, iyagoo ka wada hadlay Arimo badan oo ku aadan xaaladaha gobolka Siiba tan magaalada Kismaayo.
Maanta ayay ka amaba baxayaan Magaalada Muqdisho iyagoo ku wajahan Magaalada Kismaayo halkaas oo siweyn looga sugayo.
Waxay wafdigan inta ay ku sugan yihiin Kismaayo qeyb ka qaadan doonaan xalinta khilaafaadyo iyo is qabqabsi la sheegay in ay ka jiraan gudaha magaalada Kismaayo taas oo ku aadan maamulida Dowlad goboleedka Jubaland.
Waxay la kulmi doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada, Waxgaradka, Odayaasha, siyaasiyinta ku sugan magaaladaas iyo weliba Madaxda Mamul goboleedka Jubaland siiba madaxweynaha Maamlmo ka hor loo dootay in u noqdo Madaxweynaha Maamulka Jubaland Axmed Madoobe.
Waxay kala hadlo doonaan dhinacyadan kala duwan sidii xal meel laisugu imanlahaa, iyo ka shaqeyta isu soo dhowaansho ka dhexdhaca maamulka Jubaland iyo Dowlada federaalka Soomaaliya,
Dhinaca kale magaalada Kismaayo waxaa ku sugan wafdi ka kooban xildhibaano iyo xubno kale kuwaas oo ay dowlada federaalka Soomaaliya u soo bagacawday u kuurgalka xaaladaha siyaasadeed ee Jubaland.
Waxay sheegeen xildhibaanada ka midka ah gudigaasi qaarkood oo saxaafada lahadlay in howlaha ay u joogaan Kismaayo meel fiican ay u mareyso ayna kulamo gaar gaar ah la qaateen dhinacyo kala duwan.